Iibsaday ah iPhone, iPad ama iPod, kaliya si aad u ogaato in dhamaan files music ayaa weli ku jira ee aad taleefan Android jir ama kiniin ah? Ma suurogalbaa in ka Android wareejiyo music in Lugood, si aad u hagaagsan kartaa iPhone, iPad ama iPod? Waa hagaag, ma ahan heshiis weyn. Waxaa jira siyaabo badan oo aad tahay raaci karaan. In this article waxaan idin tusiyo 3 hab oo loo sameyn Android inay Lugood music kala iibsiga si fudud. Iska akhriso on.
Qaybta 1. Transfer Music Android inay Lugood on Mac
Qaybta 2. ka Android Copy Music inay Lugood ee PC
Tan iyo markii ay Mac ku guuldareysto in la ogaado qalab Android, si ay u gudbiyaan music Android inay Lugood, waxaad u baahan tahay qalab dhinac saddexaad caawimaad ah. Halkan, waxaan ku talinaynaa Wondershare TunesGo (Mac) , Android inay Lugood qalab kala iibsiga xirfadeed. Waxay ka dhigaysa mid aad u sahlan si ay u gudbiyaan oo dhan music Android, playlists iyo filimada in Lugood ee 1 click.
Fiiro gaar ah: software Tani waxay si buuxda u taageeraysaa in ka badan 2,000 oo qalabka Android, oo ay ku jiraan Samsung, Google, LG, HTC, Motorola, Sony, ZTE, Huawei, iyo in ka badan. Ka sokow, waxa ay la jaan qaada Android 2.1 iyo ka dib.
Hoos waxaa ku tutorial sahlan ku saabsan sida loo ka Android wareejiyo music in Lugood on Mac. Just Raaca.
Ku rakib TunesGo Wondershare u Android (Mac) ee u Mac.Run. Lugood Your socon doonaa si toos ah. Haddii aan, ordo Lugood gacanta.
Connect qalab Android inay Mac via ah cable USB Android.
Ka dib markii ay ku xiran, telefoonka aad Android tusi doonaa in uu furmo suuqa hoose. Riix nidaameed Lugood in Android .
Tag geeska kore ee midigta iyo guji . Tiirka bidix, waxaad ka arki kartaa Music, Movies, Photos iyo Qaar kale (documents) tab. Guji mid ka mid tab iyo dooran faylasha aad doonayay. Markaas, xakameeyo guji faylasha. In menu jiido-hoos, dooran dhoofinta in Lugood.
Si ka duwan wareejinta music ka Android inay Lugood on Mac, waxaad samayn kartaa wax la mid ah si xor ah ku PC. In qayb ka mid ah, waxaan idinku leeyahay 2 siyaabo. Mid ka mid ah waa lacag la'aan, u baahan kale in la siiyo, balse fudud.
Xalka 1. Music Transfer Gacanta ka Android inay Lugood u Free
Buur qalabka sida Android ah drive adag dibadda ee PC adigoo isticmaalaya cable USB ah.
Dul card SD qalab Android aad iyo aad u furto, oo nuqul ka folder music in ay kombiyuutarka.
Orod Lugood aad kombuutarka. Riix Music hoos buugga Library. Riix File > dar Folder inay Library ... . Dul u folder warbaahinta Android oo addd in Lugood.
Xalka 2 beddelashada Music ka Telefonada casriga ah si ay u Lugood on PC / Mac
Xalka 3 Click in dhoofinta Android Music inay Lugood
Marka loo eego Xalka 1, habkan u muuqataa in ka badan ku haboon. Just 1 click, iyo dhammaan music iyo playlists dhoofin doonaa in Lugood. Wixii aad u baahan yahay Wondershare MobileGo for Android , dhan-in-hal tababare Android.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileGo for Android ayaa si fiican u la shaqeeya telefoonada badan Android iyo murriyado, oo ay ku jiraan HTC, Samsung iyo Sony. Hel info dheeraad ah oo ku saabsan qalabka Android taageeray .
Ka dib markii ay soo degsado software ah, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka ay fududahay in la dhoofiyo music iyo playlists ka Android inay Lugood.
Orod software ku PC iyo sheeko ka baxay cable USB ah in lagu xiro qalabka Android si aad u PC.
Guji ka Qalabka tab khaanadda tagay. Markaas, ee line saddexaad - "Tools for Music iyo Movies Lovers", guji dhoofinta Music inay Lugood .
Copy Lugood Music inay Device Android
Nidaameed Android la Lugood waxba ka heli
> Resource > Lugood > Music Transfer ka Android inay Lugood Si fudud